Ugu yaraan labo askari oo ku dhintay dagaal Shebeellaha Dhexe ku dhexmaray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan labo askari oo ku dhintay dagaal Shebeellaha Dhexe ku dhexmaray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya
December 26, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Ciidamada dowladda Soomaaliya. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo askari ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dagaal u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Dagaalka oo salka ku haya muran u dhaxeeya labo sargaal oo ciidamada ka wada tirsan ayaa ka dhacay deegaanka Xawaadley oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, sida ay ku warameen saxaafada maxaliga ah ee koonfurta Soomaaliya.
Dagaalada dhexmara ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho ayaa ah kuwo mar walba soo noqnoqda, waxaana keena dagaaladaas ciidamada oo aan u diyaarsanayn qaab qaran balse u habaysan qaab qabiil.
Tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii xukuumadii dhexe ee Madaxweyne Maxamed Siyaad Bare 1991-dii, Soomaaliya ma aysan yeelan ciidamo qaran oo leh tababar sare.
January 4, 2017 Jawaari oo iclaamiyay in uu markale u tartamayo guddoomiyaha baarlamaanka
December 7, 2016 Xasan Shiikh oo Kismaayo kula kulmay xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee Jubbaland laga soo doortay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa sheegay in ay baari doonaan wararka sheegaya in shan qof oo shacab ah lagu dilay weerar ay fuliyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya, sida lagu sheegay bayaan Jimcadii kasoo baxay [...]